24-saac ugu dambeesay iyo qodobada Sports-ka ugu hadal heynta badnaayeen – Wakaaladda Wararka Hiilnews
24-saac ugu dambeesay iyo qodobada Sports-ka ugu hadal heynta badnaayeen
By admin on 23/10/2018 No Comment
Talaaddo, October, 23, 2018(HNN) Qodobka 1-aad: Sadio Mane ayaa diidan Liverpool heshiis cusub inuu u saxiixo waxayna Daily Star ogaatay inuu rabo ku biiritaanka kooxda Man United.
Qodobka 2-aad: Chelsea ayaa qorsheeneyso inay 97.5-milyan oo pound kaga soo qaadato Inter Milan cayaryahan Icardi sidoo kalena Blues bisha Alvaro Morata wey iska fasaxayaan.
Qodobka 3-aad: Tababaraha kooxda Real Madrid Julen Lopetegui ayaa loo qabtay labada kulan Madrid kusoo fool leh Viktoria Plzen iyo Barcelona haddii labadaas kulan natiijo wanaag ayaa kooxdiisa Real Madrid heli weyso waa la racadeen doonaa.
Qodobka 4-aad: Daafaca Inter Milan Milan Skriniar ayaa weli ka madax adeegayo inuu kooxdiisa heshiis cusub u saxiixo xili uu dalabyo ka helaayo kooxaha Man United iyo Man City.
Qodobka 5-aad: Chelsea ayaa ku fikireyso weeraryahanka naadiga Genoa iyo xulka Poland Krzysztof Piatek inay bisha Janaayo gacanta kusoo dhigaan.
Qodobka 6-aad: Leonardo Bonucci ayaa sheegay inuu ku biiri karay kooxda Man United xagaagii hore balse ka doortay inuu Serie A-da baaqi kusii ahaado.
Qodobka 7-aad: Cristiano Ronaldo ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay cayaarista kubada cagta iyo noloshiisa gaarka ah xili tan iyo bishii hore dacwad arimo kufsi ah ah la xariirtay loo heestay.
Qodobka 8-aad: Macalin Antonio Conte ayaa ugu cad cad loolanka loogu jiro hogaaminta kooxda Real Madrid.
Qodobka 9-aad: Juventus ayaa weli qorsheeneyso inay gacanta kusoo dhigto Paul Pogba iyo Marcelo bisha Janaayo ama xagaaga dambe.
Qodobka 10-aad: Kooxda West Ham ayaa si rasmi ah shaaca kaga qaaday in cayaaryahankeeda Andriy Yarmolenko oo 28-jir ah garoomada ka maqnaan doono ugu yaraan 6-bilood ayadoo qaliin dhanka jilibka ah looga sameenayo.
Qodobka 11-aad: Kooxda Man City ayaa qiratay inay suuqa ka baadi goobeyso cayaaryahankii badal u noqon lahaa Fernandinho oo sii gaba gaboobayo waxayna 60-milyan oo pound ku doonesaa Ruben Navas oo Wolves ka tirsan.
Qodobka 12-aad: Liverpool ayaa iaka fasaxeyso weeraryahankeeda Divock Origi waxaana lala xariirinayaa kooxaha Fenerbahce iyo Galatasaray.
Qodobka 13-aad: Man United oo dhawaan heshiis 5-sano ah ka saxiixday Luke Shaw ayaa sheegtay inay hormar wacan ka sameesay qaabkii qandaraas cusub looga saxiixi lahaa Juan Mata iyo Ander Herrera oo heshiisyadooda dhamaadka xili cayaareedkan ku eg.
Qodobka 14-aad: Barcelona ayaa ku fikireyso inay bisha Janaayo ama xagaaga dambe iska iibiso Ousmane Dembele haddii ay qiimo fiican ku helayaan.
Qodobka 15-aad: Man United ayaa heli doonto fursad ay ku iibsato Alex Sandro diirada saareyso sidii ay Marcelo Real Madrid kaga soo qaadan laheyd.
Qodobka 16-aad: Maamulaha guud ee Juventus Giuseppe Marotta ayaa ku dhow inuu Inter shaqo cusub ka qabto wuxuuna Juve xilkeeda iska dhiibi doonaa Khamiistan nagu soo fool leh.
Qodobka 16-aad: PSG oo isha la raaceyso Antoine Griezmann waxayna u aragtaa qorshe ahaan inuu xagaaga dambe Neymar badal u noqon karo kaasi oo doonayo Barcelona inuu dib ugu laabto.
24-saac ugu dambeesay iyo qodobada Sports-ka ugu hadal heynta badnaayeen added by admin on 23/10/2018